Magnet koolo - Shiinaha Ningbo Sine
Koolo Magnet Joogtada Magnet + koolo Tape (Assembly magnetic) Ningbo Sine magnetic Company Limited manufactures wareegsan, disc, qaab & kartoo magnet kale neodymium qaabeeya iyo magnet dabacsan oo leh tayo sare leh 3M is cajalad -adhesive xoog leh, ama sharooto double-dhinac caadi ah. qalabka Joogtada magnetic in la doorbiday in la bixisey cajalado koolo: magnet NdFeB fasalada N35-N54 iyo magnet dabacsan. Conventionally, cajalado, xabag, waxaa laga codsadaa in ay N pole ama S soo po ...
Magnet Joogtada ah + koollo (Assembly magnetic)
Ningbo Sine magnetic Company Limited manufactures wareegsan, disc, qaab & kartoo kale qaabeeya magnet neodymium iyo magnet dabacsan oo leh tayo sare leh 3M is cajalad -adhesive xoog leh, ama sharooto double-dhinac caadi ah.
qalabka Joogtada magnetic in la doorbiday in la bixisey cajalado koolo: magnet NdFeB fasalada N35-N54 iyo magnet dabacsan. Conventionally, cajalado, xabag, waxaa laga codsadaa in ay pole N ama S cirif ee Nikkel / amayno / Rubber plated magnet boron birta neodymium ama magnet dabacsan un-plated. Dahaadhay la cayimay karaa by macaamiisha.
cajalado koolo: Shiinaha Rare Earth Magnet Limited siisa 3M cajalado is koolo iyo sharooto double-dhinac wadaagaan oo dhumucdiisuna: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm iyo sidaas on. Macaamiisha dooran kartaa model cajalad 3M gaar ah ama dhumucda sida uu dalbanayo codsiga dhabta ah. The sii dhumuc weyn koollo yahay, ee ay adhesiveness xoog u noqon doonaa.
Currently, ugu cajalado koolo inta badan la isticmaalo waxaa ka mid ah 3M467, 3M9495LE iyo 3M4945.
Codsiga: magnet dabacsan koollo lagu gartaa xoog daciif magnetic iyo qaab dabacsan iyo hanuuninta magnetization. Sidaa darteed, waxaa si weyn loo isticmaalaa in shidma, qalab iyo meter, advertising, decoration, alaabta lagu ciyaaro, in kaararka ganacsiga, buugga telefoonnada, iyo sidoo kale in la sii isticmaali karo in ka suuroggalaan baabuurta, hotel qufulka sare albaabka, qalab caafimaad iyo daryeel caafimaad.
Sida neodymium koolo magnet joogto ah , waxaa qoreysa magnetism aad u xoog badan iyo muuqaalka farshaxanka. Waxaa guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in shido, qalabka korontada, ama hardware ah decoration guriga, therapy magneto, dareemayaal ugu yar ama wayn ee guriga ama hababka ammaanka xafiiska iyo wixii la mid ah.
Iyada oo mabda'a of tayo leh, credit, tanaasulaad qiimaha iyo gaarsiinta degdeg ah, waxaan si diiran macaamiisha cusub iyo wax duug ah iney kuu soo baadhaan.
Previous: Name Tags magnetic
Next: xigay magnetic